कसरी आईयूडी जन्म नियन्त्रण काम गर्दछ? | चेकअप - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन कम्पनी, समाचार भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण चेकआउट कम्पनी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> आईयूडी जन्म नियन्त्रणको बारेमा तपाईले के जान्नुपर्दछ
तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन् जब यो आउँदछ एउटा जन्म नियन्त्रण विधि छनौट गर्दै । प्रयोगकर्ताहरूको बीचमा उच्च श्रेणीको एक IUD वा इंट्राउटरिन उपकरण हो। IUD एक सानो, T-आकारको उपकरण हो जुन तपाईंको चिकित्सक वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक गर्भावस्था रोक्नको लागि तपाईंको गर्भाशयमा सम्मिलित गर्दछ। एक इंट्रायूटरिन उपकरण दुई प्रकारमा आउँदछ: हर्मोनल IUD र गैर-हार्मोनल IUDs। ती दुबै गर्भावस्था रोक्नको लागि काम गर्छन् तर फरक तरीकाले।
कसरी खमीर संक्रमण को लागी चिया रूख को तेल को उपयोग गर्ने
यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने लामो-अभिनय उल्टो गर्भनिरोध (LARC) विधि जुन अधिक महिलाका लागि पनि प्रभावकारी र सुरक्षित मानिन्छ, IUD प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहोस्।
आईयूडी जन्म नियन्त्रण भनेको के हो?
IUD एक सानो इंट्रायूटरिन गर्भनिरोधक उपकरण हो जुन तपाईंको चिकित्सक वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक गर्भावस्था रोक्नको लागि तपाईंको गर्भाशय भित्र घुसाउँदछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई प्रकारका IUD हरू उपलब्ध छन्। एउटा हर्मोनल आईयूडी हो जसले हर्मोन प्रोजेस्टिन रिलीज गर्दछ, र अर्को हो हर्मोनल वा तामाले-लेपित IUD। तिनीहरू दुबै एफडीए स्वीकृत छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा उपलब्ध हर्मोनल IUDs शामेल छ मिरेना , Liletta , Skyla , र Kyleena ।
यदि तपाइँ गैर-हार्मोनल विधिका लागि विकल्प लिनुहुन्छ भने, संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र FDA- अनुमोदित विकल्प हो प्यारागार्ड ।
कसरी एक IUD काम गर्दछ?
दुबै हार्मोनल IUD र तामा IUD गर्भावस्था रोक्नुहोस् शुक्राणुलाई अण्डामा पुग्न रोक्दै। कसरी तिनीहरूले त्यसो गर्छन् तिनीहरूलाई अलग सेट गर्दछ।
हार्मोनल IUDs लचिलो प्लास्टिकको सानो T-आकारको टुक्रा हो जुन तपाईंको गर्भाशय भित्र जान्छ। तिनीहरूले तपाइँको शरीरमा हर्मोन प्रोजेस्टिनको थोरै मात्रा जारी गरेर गर्भावस्था रोक्नको लागि काम गर्दछन्। जब एक हार्मोनल आईयूडी प्रोजेस्टिन रिलीज गर्दछ, तपाईंको ग्रीवा बलगम गाढा हुन्छ। यस बाक्लो ग्रीवा म्यूकसले शुक्राणुहरूको आन्दोलनलाई ढिलो बनाउँदछ, यसलाई अण्डाहरूसँग भेट गर्नबाट यसलाई निषेचन गर्न रोक्दछ। हार्मोनल आईयूडीहरूले गर्भाशय अस्तर धेरै पातलो पनि राख्दछ, जसले एक निषेचित अण्डालाई गर्भाशयमा रोक्नबाट रोक्दछ।
केहि प्रोजेस्टिन-आधारित IUDs लाई रोक्न सक्छ ovulation तपाईको अण्डाशय छोड्दा अण्डाहरूलाई रोक्दा हुनेबाट। जब यो हुन्छ, शुक्राणुसँग भेट गर्न अण्डा हुँदैन र गर्भावस्थालाई रोक्न सकिन्छ।
एक प्रभावी जन्म नियन्त्रण विधिको रूपमा यसको विशिष्ट प्रयोगको अतिरिक्त, हार्मोनल IUD ले पनि प्रासंगिक लक्षणहरू कम गर्न सक्छ जस्तै क्र्याम्पिंग र अवधि रक्तस्राव हल्का बनाउँदछ। केही महिला पूर्ण अवधिमा रोकिन्छ, जबकि अन्य अनियमित रक्तस्राव वा शुरुका केही महिनामा स्पटिंग अनुभव गर्न सक्छ।
गैर-हार्मोनल आईयूडी गर्भावस्था रोक्नको लागि तामाको प्रयोग गर्दछ, जुन शुक्राणु कोषहरूलाई मनपर्दैन। तामाले शुक्राणुहरूलाई उनीहरूको अ way्गमा पौंडी खेल्नबाट रोक्छ र तिनीहरू हिंड्ने तरिका परिवर्तन गर्दछ। यदि अंडे निषेचित छैन भने यो गर्भाशय भित्तामा रोप्दैन, जसको मतलब गर्भावस्था हुन सक्दैन।
हार्मोनल IUD भन्दा फरक, तामा IUD केवल एक ब्रान्डमा उपलब्ध छ, जसलाई परागार्ड IUD वा तांबे T IUD भनिन्छ। यद्यपि यो हर्मोन-रहित आईयूडी गर्भावस्था रोक्नको लागि लामो समयसम्म काम गर्दछ। जबसम्म तपाईं प्यारागार्डको साथ समस्याहरू अनुभव गर्नुहुन्न, तपाईं यसलाई १० बर्ष सम्ममा राख्न सक्नुहुनेछ।
गर्भावस्था को संभावना
दुबै प्रकारको आईयूडीको साथ गर्भवती हुने सम्भावना कम छ। अमेरिकन कलेज अफ ओब्स्टेट्रिशियन एण्ड गाईन्कोलॉजिस्ट्स (एसीओजी) का अनुसार, आईयूडी, जुन एक लामो-अभिनय उल्ट्याउन सकिने गर्भनिरोधक विधि मानिन्छ, सबैभन्दा प्रभावकारी जन्म नियन्त्रण विकल्पहरू मध्ये एक हो। प्रयोगको पहिलो वर्षको बखत, एसीओजी भन्छ IUD को साथ 100 महिलाहरु मा 1 भन्दा कम गर्भवती हुनेछ।
प्यारागार्ड, तामा IUD, सम्मिलन पछि तुरुन्त गर्भावस्था रोक्न सक्छ। यद्यपि यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि मिरेना, काइलिना, लिलेट्टा, र स्काइला - हर्मोनल आईयूडीहरू केवल गर्भावस्था रोक्ने बित्तिकै रोक्छ यदि तपाईंको डाक्टरले तपाईंको मासिक चक्रको पहिलो सात दिनमा राख्यो भने। अन्यथा, तिनीहरू अनुसारको सात दिन पछि सम्मिलन कार्य सुरु गर्छन् नियोजित अभिभावक ।
कुनै पनि प्रकारको IUD ले तपाईंलाई यौन संक्रमण, वा STI हरूबाट बचाउँदैन। बढि सुरक्षाका लागि तपाईको पार्टनरलाई कन्डम लगाउन लगाउनुहोस्।
IUDs आपतकालीन गर्भनिरोधका रूपमा
यदि असुरक्षित सेक्सको पाँच दिन भित्र सम्मिलित गरियो भने, प्यारागार्ड (तामा) आईयूडी एक प्रकारको मानिन्छ आपतकालीन गर्भनिरोध । यद्यपि, हार्मोनल आईयूडी आपतकालीन गर्भनिरोधका रूपमा प्रयोग गर्न सकिदैन।
IUD सम्मिलन र हटाउने
तपाईंको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले IUD सम्मिलन र तिनीहरूको कार्यालयमा हटाउनेछ। दुबै प्रक्रियाहरू अपेक्षाकृत द्रुत छन् र केवल सानो असुविधाको कारण।
आईयूडी राख्नु अघि, तपाईंको डाक्टरले तपाईंको मेडिकल ईतिहास समीक्षा गर्नेछ र श्रोणि जाँच गर्नेछ। तपाईको मासिक चक्रको बखत कुनै पनि समयमा IUD सम्मिलित हुन सक्छ। IUD सम्मिलित गर्न, तपाइँको डाक्टरले पहिले तपाइँको योनीमा एउटा नमूना राख्दछ। ती उपकरण एक उपकरण तपाइँको योनी र गर्भाशय ग्रीवा र गर्भाशय मा मार्फत मार्गनिर्देशन को लागी प्रयोग गर्दछ।
आईयूडीहरू बिरामीहरूको बहुमतमा सम्मिलित गर्न पर्याप्त सजिलो हुन्छ, भन्छन् जी। थॉमस रुइज , MD, OB-GYN मेमोरियल केयर ऑरेंज कोस्ट मेडिकल सेन्टरमा नेतृत्व।
IUD सँग हटाउने प्रक्रियाको साथ मद्दत गर्न तारहरू छन्। यी पातलो प्लास्टिक थ्रेडहरूले तपाईलाई कष्ट दिनुहुन्न। तपाईंको पार्टनरले सेक्सको बखत यी तारहरू एकदम दुर्लभ मामिलाहरूमा महसुस गर्न सक्छ, तर यो अत्यन्तै असम्भव छ। तपाईंको डाक्टर स्ट्रिंगहरू ट्रिम गर्न सक्षम हुन सक्छ।
तपाईंले निश्चित रूपमा स्ट्रि theको लम्बाई र स्थिति जाँच गर्नुपर्दछ कि ती परिवर्तन भएका छैनन्। स्ट्रि thatहरू जुन अचानक छोटो हुन्छन् वा हराइरहेको छ यसले संकेत गर्दछ कि आईयूडी स्थिति भन्दा बाहिर सर्‍यो। तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई कुनै प्रश्न वा सरोकार बोलाउनु पर्छ।
सामान्यतया, IUD सम्मिलनको अवधिमा असुविधा मध्यम क्र्याम्पिंग हो। तपाईं एक वा पहिले भन्दा पछि काउन्टर दर्द राहत औषधि लिन सक्नुहुन्छ दर्द कम गर्न। यदि तपाईंसँग कम पीडा सहिष्णुता छ भने, डा रुइज भन्छन कि तपाईंको डाक्टरले गर्भाशय क्र्याम्पिंग कम गर्न स्थानीय एनेस्थेटिक ब्लक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो दुर्लभ अवसरहरूमा हो कि कसैले गम्भीर पीडाको कारण प्रक्रिया त्याग गर्दछ, डा। रुइज भन्छन्।
प्रक्रिया पछि, तपाईं दुखाइ र पेटको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यसलाई केहि दिनको लागि सजिलो लिनुहोस्। तपाईंको डाक्टरले ओभर-द-काउन्टर दुखाइ राहत दिन सिफारिश गर्न सक्छ जब सम्म पीडा कम हुँदैन।
विरलै अवस्थाहरूमा, एक IUD बाहिर झर्न सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, तुरन्तै तपाईंको डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
जब तपाईं आईयूडी प्रयोग गर्न रोक्नुहुन्छ, तपाईंको डाक्टरले तपाईंको मासिक चक्रको बखत कुनै पनि समयमा यसलाई हटाउन सक्दछ।
IUD हटाउने छिटो र सरल छ। तपाईंको डाक्टरले तारहरू बुझ्नको लागि एक उपकरण प्रयोग गर्दछ, जसले तपाईंको गर्भाशयबाट IUD तान्ने अनुमति दिन्छ। यसले सामान्यतया केहि मिनेट लिन्छ, र तपाईं केवल हल्का साघुँरो र रक्तस्राव अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो केहि दिनहरूमा टाढा जान सकेन भने, आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
प्राकृतिक भिटामिन के हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन संग मद्दत
यदि तपाईं आईयूडी बदल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको डाक्टरले पुरानोलाई हटाए पछि नयाँ आईयूडी छिराउन सक्छ। तिनीहरू समान कार्यालय भ्रमणको क्रममा यसो गर्न सक्दछन्, त्यहाँ कुनै प्रकारको जटिलताहरू छैनन्। तपाईंले कहिले पनि तारहरू तान्नु हुँदैन वा आफैँ IUD हटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन।
हटाए पछि, तपाईले आफ्नो अवधि IUD भन्दा पहिलेको जस्तो फिर्ता हुने आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसले केहि महिना लिन सक्दछ। तपाईं हटाए पछि पनि गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, अर्को जन्म नियन्त्रण विधि प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुन चाहनुहुन्न।
आईयूडी साइड इफेक्टहरू
सबै जन्म नियन्त्रण विकल्प साइड इफेक्टको साथ आउँदछन्। भाग्यवस, आईयूडीबाट प्रायः साइड इफेक्टहरू हल्का हुन्छन् र गइन्छन् वा केही महिना भित्र कम ध्यान पाउन सकिन्छ। यहाँ केहि अधिक सामान्य साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईले IUD प्रयोगको साथ अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
कपर आईयूडी साइड इफेक्टहरू समावेश:
भारी र लामो समयसम्म चलने अवधीहरू
अधिक गम्भीर मासिक धर्म क्रम्पिंग
अवधि बीच स्पटिंग
IUD सम्मिलनको साथ दुखाई र क्रम्पि।
हार्मोनल आईयूडी साइड इफेक्टहरू:
पहिलो महीनामा लगातार स्पॉटि or वा रक्तस्रावको धेरै दिनहरू।
अवधि बीच स्पटिंग।
मासिक रक्तस्राव पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्छ
केहि प्रयोगकर्ताहरू आईयूडीको साथ वजन बढाउन चिन्तित छन्। शुभ समाचार? तामा IUD ले वजन बढाउनको कारण गर्दैन। जहाँसम्म, मान्छे को एक सानो प्रतिशतले मामूली रिपोर्ट तौल मिरेना जस्ता हर्मोनल आईयूडीको साथ, प्रोजेस्टिनको विमोचनको कारण। तर यो अस्पष्ट छैन यदि यो प्रोजेस्टिन वा अन्य जीवनशैली कारकहरूको कारणले हो। यदि तपाईको वजन बारे चिन्ता छ भने, आफ्नो डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस्।
आईयूडीका बेफाइदाहरू के हुन्?
IUD जन्म नियन्त्रण को एक लोकप्रिय रूप हो, तर यसको मतलब यो सबैको लागि सही छैन। यस अनुसार Kecia Gaither , एमडी, एक बोर्ड-प्रमाणित OB-GYN र NYC स्वास्थ्य + अस्पताल / लिंकन मा मातृ भ्रुण चिकित्सा विशेषज्ञ, निम्नलिखित सर्तहरूको महिलाले IUD प्रयोग गर्नुहुन्न:
यदि तपाईलाई तामाको एलर्जी वा विल्सनको रोग छ भने तामा IUD (गैर-हार्मोनल) प्रयोग नगर्नुहोस्, जुन एक दुर्लभ विकार हो जसले तामालाई मस्तिष्क र कलेजो जस्ता महत्वपूर्ण अंगहरूमा जम्मा गर्दछ।
यदि तपाईं स्तन क्यान्सर को एक इतिहास छ भने एक हार्मोनल- IUD प्रयोग नगर्नुहोस्।
हार्मोनल आईयूडी वा गैर-हार्मोनल आईयूडी प्रयोग नगर्नुहोस् यदि तपाईं गर्भाशय ग्रीवा वा गर्भाशय, एड्स, अन्तमा मासिक रक्तस्राव, वा कलेजो रोग को क्यान्सर छ भने।
सक्रिय वा तीव्र श्रोणि ईन्फ्लेमेन्टरी रोग भएका महिलाहरूलाई संक्रमण समाधान नभएसम्म आईयूडी राख्नु हुँदैन। डाक्टरले आईयूडी सम्मिलित गर्नु अघि संक्रमणको लागि तपाईंलाई स्क्रिन गर्न सक्दछ।
त्यहाँ उदाहरणहरू पनि छन् जब IUD सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुँदैन, तर यसले अझै पनि काम गर्न सक्दछ।
यदि तपाईंलाई धेरै मासिक रक्तस्राव छ भने आफ्नो डाक्टरसित कुरा गर्नुहोस्। उनीहरूले तामा IUD प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन सक्दछ किनकि यसले भारी अवधि र क्र्याम्पिंग निम्त्याउन सक्छ।
केही व्यक्तिहरूको लागि, भारी रक्तस्राव र क्र्याम्पि six छ महिना पछि राम्रो हुन्छ, तर अरूहरूको लागि यो IUD हटाउने सम्म जारी रहन्छ। यदि तपाईं प्रारम्भिक तीनदेखि छ महिनाको लागि यसको प्रतिक्षा गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले लक्षणहरू सहन योग्य बनाउनको लागि पर्याप्त कम भएको पाउनुहुनेछ।
थप रूपमा, डा। रुइज बताउँछन् कि आईयूडीहरू गर्भाशय शरीरको रचनाशोथ वा एक असामान्य गर्भाशय गुहाका महिलाहरूमा contraindated छन्। डाई रुइज भन्छन्, असामान्य गर्भाशय ब्लीडिंग हुने कसैमा आईयूडी सिफारिस गरिदैन। जबसम्म उनीहरूमा हिस्टोरोस्कोपी वा एन्डोमेट्रियल बायोप्सी द्वारा एंडोमेट्रियल मूल्यांकन गरिएको हुँदैन। त्यो मूल्यांकनमा पेल्विक अल्ट्रासाउन्ड समावेश हुन सक्छ।
र दुर्लभ मामिलाहरूमा, त्यहाँ छ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोगको सानो वृद्धि जोखिम जब एक IUD प्रयोग गर्दै। यस अनुसार ACOG , त्यो जोखिम १% भन्दा कम छ वा महिला उमेर वा IUD प्रकारको पर्वाह नगरी। त्योले भन्यो, तपाईको डाक्टरले तपाईको गर्भाशयमा IUD राखे पछि पहिलो तीन हप्तामा पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी रोग हुने जोखिम सबैभन्दा सामान्य छ।
एसीओजीका अनुसार, हार्मोनल र गैर-हार्मोनल आईयूडीहरूले तपाईंलाई यौन संक्रमणबाट बचाउँदैन। असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्नुमा तपाईलाई यौन संक्रमित संक्रमणको उच्च जोखिममा पार्छ जस्तै गोनोरिया, क्लेमाइडिया, जननेंद्रिय हर्पेस, एचपीभी, र एचआईभी जस्ता।
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न वा सरोकार छन् भने, तपाइँको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। तिनीहरूले तपाईंलाई IUD सही जन्म नियन्त्रण विधि सही हो भने निर्णय गर्न सहयोग गर्न सक्दछन्।
आईयूडी जन्म नियन्त्रणका फाइदाहरू के हुन्?
दुबै हर्मोनल आईयूडी र गैर-हार्मोनल आईयूडीका धेरै फाइदाहरू छन्। पहिलो, डा। रुइज भन्छन्, तिनीहरू काम गर्ने लामो समय हो।
तपाइँले छनौट गर्नुभएको IUD प्रणाली वा प्रकारमा निर्भर गर्दै, डा रुइज भन्छन् IUD ठाउँमा रहन सक्छ र तीनदेखि १० बर्षसम्म कतै पनि काम गर्न जारी राख्न सक्छ। अधिक विशेष रूपमा, हर्मोनल आईयूडी सामान्यतया तीन देखि छ वर्षको लागि काम गर्दछ। र तामा IUD गर्भावस्था 10 वर्ष सम्म रोक्छ।
अन्य सकारात्मक प्रभावकारिताको उच्च डिग्री हो। आईयूडीसँग १% भन्दा कम असफलता दर छ, डा। रुइज भन्छन्। यसका साथै आईयूडी जहिले पनि हुन्छ, गर्भनिरोधक गोली लिने बिर्सनु हुँदैन, प्याचमा राख्नुहोस्, वा शटहरूको लागि तपाईको डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
प्रोजेस्टिन आईयूडीको कम लाभ वा मासिक रगत प्रवाहको अतिरिक्त लाभ छ उपकरणको ठाउँमा रहेको अवधिको लागि। र तामा IUDs एक हार्मोनल गर्भनिरोधक चाहँदैनन् जो एक गैर-हार्मोनल विधि प्रदान गर्दछ।
डा। रुइजले भारी पीडादायी मासिक महिलाहरुमा प्रोजेस्टिन IUD को उपयोगितालाई पनि औंल्याए। उनी भन्छिन्, to०% सम्म सम्मिलन गरेको 50 देखि months महिना सम्म मासिक रक्तस्राव हुँदैन, र अन्य %०% लाई हल्का, कम पीडादायी र कम बारम्बार गर्भाशय रक्तस्राव हुनेछ, उनी भन्छन्। यदि तपाइँ मासिक रक्तस्राव अनुभव गर्नुहुन्छ, यो एक ट्याम्पन प्रयोग गर्न अझै सुरक्षित छ ।
यदि तपाईं गर्भवती हुन चाहनुहुन्छ भने, आईयूडी परिवार नियोजनको लागि प्रयोग गर्न जन्म नियन्त्रणको एक प्रभावकारी रूप हो। आईयूडी जन्म नियन्त्रणको एक उल्टो प्रकार हो, जसको मतलब यो एक पटक यसलाई हटाएपछि प्रजननको तत्काल फिर्ताको फाइदा हुन्छ। प्रजनन क्षमता सामान्यतया फर्किन्छ तपाईको लागि सामान्य के हो।
कसरी IUD पाउने
तपाईंको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई यो निर्धारित गर्न मद्दत गर्न सक्दछ कि IUD तपाईंको लागि सही हो। केही बीमा योजनाहरु जन्म नियन्त्रण कभर, त्यसैले योग्यता निर्धारित गर्न को लागी एक प्रक्रिया अघि कल गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं महिलाको स्वास्थ्यमा विशेषज्ञता समुदाय क्लिनिकको नजिक बस्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले निःशुल्क वा छुटमा IUD सम्मिलन प्रस्ताव गर्न सक्दछन्।
को किफायती हेरचाह कानून जनादेश कि बीमा योजना गर्भनिरोधक विधाहरु कभर। तर कार्यमा परिवर्तनहरूले निःशुल्क वा कम कभरेजको लागि तपाईंको योग्यतालाई असर गर्न सक्छ। सँधै तपाईंको IUD लागत निर्धारण गर्न आफ्नो बीमाको साथ जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई आईयूडी वा अन्य जन्म नियन्त्रण विकल्पहरूको लागि भुक्तान गर्न सहयोग आवश्यक छ भनेको डिपो-प्रोभेरा शट , जन्म नियन्त्रण गोली , र जन्म नियन्त्रण प्याच , गर्न निश्चित हुनुहोस् एकलकेयरमा मूल्य तुलना गर्नुहोस् ।
के तपाईले औषधी लिने बित्तिकै फरक पर्दछ?
रक्तचाप कम गर्न के गर्ने
कसरी tylenol र एडविल एक साथ लिने
यो कति समय लाग्छ methylprednisolone काम सुरु गर्न को लागी
एक हप्ता पछि काम गर्ने योजना छ
तपाइँ एकै समयमा allegra र zyrtec लिन सक्नुहुन्छ